Shiinaha Sponge warbaahinta warshad-goosato warshad iyo soosaarayaasha | TAA
Warbaahinta isbuunyada u xoqdowaa koox warbaahin xoqan leh oo leh isbuunyo urethane ah sida xabag, taas oo isku darsamaysa awoodda xakamaynta isbuunyada urethane-ka iyo nadiifinta iyo jarista awoodda warbaahinta qarxisa dhaqameed. Way fidsan tahay inta lagu gudajiro saameynta, u soo bandhigeysa nabarrada dusha sare iyada oo cayiman iyo muuqaal la abuuray. Markay ka baxaan dusha sare, isbuunku wuxuu dib ugu balaaraa cabirka caadiga ah isagoo abuuraya faakium nuugaya inta badan sunta, sidaas darteedna wuxuu hagaajiyaa jawiga ciida.
Sida ugu badan ee loo isticmaalo waa taxanaha TAA-S oo leh aluminium oksaydh iyo taxanaha TAA-G oo leh bir bir ah.
Nooca Astaamaha Wakiilka Warbaahinta Abrasive Codsiga
TAA-S # 16 Mic 100 mikron Aluminium oksaydh # 16 Deg deg ah oo dagaal badan oo loogu talagalay dharka adag ee warshadaha.
TAA-S # 30 Mic 75 mikron Aluminium oksaydh # 30 Ka saarida lakabyada lakabka badan iyo astaanta ilaa 75 mikron.
TAA-S # 30 Mic 50 mikron Aluminium oksaydh # 80 Waxtar u leh hal ama laba lakabyo lakab ah iyo muuqaal dhan ilaa 50 mikron.
TAA-S # 30 Mic 25 mikron Aluminium oksaydh # 120 Wax ku ool ku ah miridhku iyo miridhku dhexdhexaadka ah, oo soo saara 25 micron profile.
TAA-S # 30 <25 mikron Aluminium oksaydh # 220 Wixii daaha daboolka ah ama ka tagista muuqaalka dusha yar.
TAA-G-40 +100 mikron Birta Grit G40 Ka qaad daaha ugu adag. Diyaarinta dusha sare ee dusha sare iyo ka saarista elastomeric ama waxyaabaha kale ee aadka u xun.
1. Waxsoosaarka warbaahinta ee isbuunyada ee lagu soo saaray isbuunyada polyurethane waa jajaban yahay oo muddo dheer soconaya isla markaana si fiican u xakamayn kara wasakhda wasakhda ee sida caadiga ah ka dhalata burburka maqaarka.
2. Maaddada isbuunku waxay nuugtaa wasakhda dusha sare (miisaanka miisaanka, dufanka, iwm) oo markaa waxay hagaajisaa nadaafadda dusha mawduuca.
3. Badbaadada shaqaalaha waa la wanaajiyay oo halista sida isha iyo dhaawaca warshadaha waa la dhimay sababtoo ah dib u soo noqoshada isbonji la'aantu.
4. Cilladaha tayada oo yaraada iyo dib u shaqaynta oo hooseysa
5. Daaweyn dusha sare oo tayo sare leh oo xasaasi ah oo qeexan
6. Dahaadhku sii waara, sii yareeya kharashka dayactirka.
7. Dib u warshadaynta
8. Qalabkeeda qarxinta ciidda waa mid cabirkiisu yar yahay oo la qaadi karo kuna habboon nadiifinta dusha sare ee aagga cidhiidhiga ah iyo qayb gaar ah.
9. Deegaankaan saaxiibtinimada leh, aaminka ah ee waxtarka badan leh ee abras cusub wuxuu keenayaa goobo shaqo oo nadiif ah, aadna u muuqda
1. Qalabka isbuunyada ah ee isbuunyada ah ee loo yaqaan 'media-sponge media abrasive' ayaa lagu dhejiyaa dusha sare iyada oo la adeegsanayo nidaam hawo-qaadasho
2. Burburinta isbuunyada warbaahinta wasakhda ah
* Nuujiso tamarta isku dhaca, oo la simo oo la xakameeyo sii deynta wasakhda dusha sare ee hawada
* Soo bandhig maaddada la xoqay, ka saar gudaha dusha sare
3. Markaad ka tagto dusha sare, ka Xulka wasakhda warbaahinta wuxuu dib ugulaabaa cabirkiisii ​​caadiga ahaa isagoo abuuraya faakium nuugaya inta badan habaaska iyo wasakhda
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay Marinada, Injineerka Badda, Milatariga, Mashruuca Petrochemical, Aerospace & Duulista, Awooda Nukliyeerka, Soo Celinta Taariikhda, Nadiifinta Gidaarka, Dayactirka Dhismaha iwm.
Hore: Qaadista birta birta ah
Xiga: Shaagagga shiidi FW-09 taxane
16 # Iskuxidhka Warbaahinta Isbuunyo
Warbaahin jilicsan oo jilicsan
Warbaahinta jilicsan ee jilicsan
Duufaan Diyaaradeed Jet
Isbaanishka Jet engeeg Warbaahinta
Warbaahinta Isbaanishka Duufaanta Jet
Duufaanta Jet Media
Isbuunyo Jet Silver 16
Waxyeelada Warbaahinta Isbuunyo
Isbuunyada Warbaahinta qalinka 16 #
Isbuunyada Saxaafadda Qalinka ah 220 #
Isbuunyada Warbaahinta Silver 30 #
Isbuunyada Warbaahinta qalinka 80 #
Isniinta-Jet engeeg Waayo Sale
Faa'iidada ■ nadiif ah oo hagaagsan, oo aan ku dhaawaceynin saxnaanta farsamada ee qaybta shaqada. Mechanical xoog farsamo sare, adkaansho, dabacsanaan ■ dib ayaa loo isticmaali karaa dhowr jeer, saameyn isku mid ah oo aan si fudud lagu jabin. Size cabir isku mid ah, ka dib markii uu ciid ku qarxiyay aaladda agteeda si loo ilaaliyo saamaynta dhalaalka oo isku mid ah, ma sahlana in laga tago astaan-biyood. P daahirsanaan sare iyo tayo wanaagsan waxay la kulmaan heerka caalamiga ah. Property hantida kiimikada ee xasilloon, ma nijaasaynayso waxyaabaha la kulmay ...
Hardness-ka la heli karo: GP: HRC46-50 Alaabooyin dhowaan la soo saaray oo leh xagal, jihada ayaa si tartiib tartiib ah loogu soo koobay isticmaalkeeda waxayna si gaar ah ugu habboon tahay daaweynta ka hor oksaydhka ka hor. GL: HRC56-60 Way ka adagtahay birta GP-ga, sidoo kale waxay lumisaa geesaheeda fiiqan inta lagu jiro fallaadhaha tallaalka waxayna si gaar ah ugu habboon tahay codsiyada diyaarinta dusha sare. GH: HRC63-65 engegnaantiisu sarrayso, geesaha fiiqan ayaa ku sii jiraya inta lagu jiro hawlgalka, inta badanna waxaa loo isticmaalaa qalabka wax lagu qarxiyo ee toogashada hawada lagu riixo ...
Astaamaha * Waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo noocyo kala duwan oo ah bacaad macdan ah & aalado aan macdan lahayn, sida corundum, silicon carbide, quartz arenaceous, beads glass, iwm. * Wuxuu badali karaa qayb kamid ah howsha soo qaadista. * Sii deynta boodhka oo hooseeya iyo jawiga hawlgalka oo aad ufiican, yaraynta daaweynta qashinka saliida. * Qiimo dhammaystiran oo hooseeya, nolosha adeeggu waa 30-100 jeer oo ...
Qalabka birta ah ee birta ah ee birta ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa toogashada / toogashada hawada ee noocyada kala duwan ee birta aan birta ahayn, alaabada birta ah, qaybaha aluminium, qalabka qalabka, dhagaxa dabiiciga ah, iwm, oo muujinaya midabka birta iyo gaarista siman, miridh la'aan , saamaynta daaweynta dusha sare ee matta Iyada oo tayo sare leh ahama silig biraha ceeriin ah, toogashada birta birta ah waxaa lagu soo qaatey waxyaabo isku mid ah iyo adkeysi, taas oo damaanad qaadeysa adeegyadeeda muddada dheer iyo wanaagga ...
Qaabdhismeedka kiimikada C 0.85-1.20% Si 0.40-1.20% Mn 0.60-1.20% S ≤0.05% P ≤0.05% Adag HRC 40-50 Microstructure Iskuxirnaanshaha Jilicsan ee Martensite ama Cufnaanta Troostite ≥ 7.2g / cm3 Foomka Dibadda Quruxda Huluhu Meel Gaaban <10% Qiyaasta qeybinta shaashadda Lambarka Inch qiyaasta cabbirka S70 S110 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 S930 6 0.132 3.35 ...